Otu esi ahọrọ Framework N'ihi na Gị asị Personas | Martech Zone
Onye na-azụ ihe bụ ihe mejupụtara nke na-enye gị nkọwa zuru oke nke ndị na-ege gị ntị site na ijikọta ozi igwe mmadụ na akparamaagwa na nghọta wee gosi ya n'ụzọ dị mfe nghọta.
Site n'echiche bara uru, ndị na-azụ ahịa na-enyere gị aka ịhazi ihe ndị ka mkpa, kenye ihe onwunwe, kpughee oghere ma mee ka ohere ọhụrụ pụta ìhè, ma ihe dị mkpa karịa nke ahụ bụ ụzọ ha si enweta onye ọ bụla n'ahịa, ahịa, ọdịnaya, imewe, na mmepe n'otu ibe, na-akpụ akpụ. n'otu ụzọ ahụ, na-agbalị iru ebe ahụ.
N'okwu doro anya, nke a pụtara na ndị na-azụ ahịa na-enye:
N'agbanyeghị na otu dị iche iche na-eji ngwá ọrụ dị iche iche na ụzọ dị iche iche arụ ọrụ ha, ndị na-azụ ahịa na-enyere aka hụ na mbọ niile ahụ n'otu n'otu na-akwado, ọ bụghị asọmpi.
Iji dị irè, ndị na-azụ ahịa kwesịrị:
Na-anọchi anya akụkụ isi nke ntọala ndị ahịa gị
Mepụta site na nchikota siri ike nke nyocha, nleba anya na ahụmịhe, yana nka onye ọ bụla
Gụnye mkpa, draịva, mkpali, omume enwere ike, na njirimara ndị ọzọ na-eme ka ọ dị mfe nghọta
Hazie n'okirikiri nke metụtara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ozugbo
Usoro nke ịmepụta onye na-azụ ihe bụ akụkụ nka, akụkụ sayensị - nka bụ usoro ị na-ahọrọ ịkọwapụta na ịmata ọdịiche dị n'etiti onwe gị; sayensị bụ àgwà niile, àgwà, na àgwà ndị metụtara ụdị ndị ahụ.
Ịhọrọ Framework Onye zụrụ ahịa
Enwere ọtụtụ ụzọ iji chịkọta ndị ahịa gị, mana ezigbo usoro kwesịrị igosipụta nkọwapụta nke azụmahịa gị mgbe niile - ihe ị na-ere, otu esi ere ya, na ihe kpatara ndị ahịa gị ji azụ ya.
Ọtụtụ mgbe, nke a pụtara iji otu n'ime ụkpụrụ nhazi ndị a:
Ịzụ ihe na-akpalite
Ụdị ndụ/Oge Ndụ
Kedu nke na-arụ ọrụ kacha mma?
Iji ikpe, ihe mgbu, na ịzụrụ ihe na-akpalite bụ ndị ewu ewu maka azụmahịa-azụmahịa (B2B) ndị mmadụ; iji ikpe, maapụ njem, na ụdị ndụ/nhazi ndụ bụ ndị ewu ewu maka ndị ahịa na-eri nri (B2C) na onye na-azụ ahịa ozugbo (DTC) ndị mmadụ.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhọrọ ụkpụrụ nhazi gị tupu ịme nyocha nke ndị ahịa gị, enwere ohere ị ga-emegharị ya ma ọ bụ dochie ya ma emechaa, karịsịa ma ọ bụrụ na nchọpụta gị na-ekpughe ihe ijuanya ma ọ bụ ihe a na-atụghị anya ya.
Ihe eji eme ihe bụ nkọwa dị nkenke na-akọwa ihe kpatara, otu na/ma ọ bụ mgbe mmadụ na-eji otu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Jiri ikpe bụ ngwaọrụ na-ewu ewu maka ndị na-azụ ahịa n'ihi na ha na-arụ ọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla. Ebumnobi nwere okwu ikpe bụ ịhọrọ opekata mpe ihe atụ abụọ, yana na-adịkarị n'etiti ihe atụ atọ na ise nke dị iche na nke enwere ike ịmata - ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmata njirimara ọ bụla nke isi ihe ụdị ndị ọrụ dị iche iche nwere, dị ka ọnụọgụ mmadụ, ọkwa ndụ, ọrụ, ụdị ndụ, àgwà, njikọ, àgwà, wdg, mgbe ahụ, ị ​​​​ga-achọgharị ma ọ bụ gbanwee okwu ikpe gị ma ọ bụ họrọ ngwaọrụ mkpụkọ dị iche.
Ihe mgbu bụ nsogbu na-adịgide adịgide ma ọ bụ na-emeghachi omume na-adịghị mma ma ọ bụ kpasuo ndị ahịa iwe iwe. Nke ngwọta bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị mgbe niile. Isi ihe dị na iji isi ihe mgbu na ndị na-azụ ahịa bụ inwe ike ijikọ onye ọ bụla na njirimara dị iche iche nke igwe mmadụ na / ma ọ bụ akparamaagwa. N'echiche sara mbara, e nwere ụdị ihe mgbu anọ, nke sitere na ahụmahụ ruo na adị:
Ọ bụrụ na a kọwapụtara ihe mgbu gị n'ụzọ sara mbara, ị nwere ike ejedebe na ìgwè ndị ahịa bụ ndị n'ezie otu; Ọ bụrụ na akọwara ha nke ọma, ị nwere ike ịbanye na ndị ahịa na-adabaghị na otu ọ bụla.
Otu aghụghọ bụ ijikọta isi ihe mgbu na usoro nke abụọ, dị ka ihe eji eme ihe ma ọ bụ usoro ndụ.
Maapụ njem bụ nkọwa eserese nke usoro atụmanya na-aga iji bụrụ onye zụrụ ahịa. Maapụ njem nwere ike ịpụta nke ọma, mana n'ozuzu soro otu usoro n'ozuzu ya:
Nyochaa ma nyochaa nhọrọ (dị mkpa maka B2B; obere mkpa maka B2C)
Jirikwa ngwaahịa/ọrụ ọzọ ma ọ bụ dochie ya
Mgbe a na-eji maapụ dị ka ihe eji emepụta ihe maka ndị na-azụ ihe, ọ dị mkpa inwe ike ịmata njirimara ndị dị n'akụkụ ụzọ ọ bụla nwere ike inwe ọnụ, dị ka ọnụọgụgụ igwe mmadụ, ihe omume ndụ & ọkwa, ọrụ, àgwà, mmekọ. nhọrọ ndụ, wdg.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmata nke ọ bụla n'ime nkọwa ndị a, ị ga-ahọrọ ngwaọrụ ọzọ ma ọ bụ jikọta maapụ njem na ngwaọrụ nke abụọ.
Ihe na-akpalite ịzụrụ ihe bụ ihe omume na-egosi ebumnobi ma ọ bụ nwee mmasị nke onye ahịa. N'ihi na ihe ndị na-akpali akpali nwere ike ịbụ ihe ọ bụla (karịsịa mgbe ha bụ dijitalụ), ha nwere ike isi ike iji ya na ndị mmadụ.
Isi ihe bụ ịhọrọ ihe mkpalite metụtara kpọmkwem, njirimara enwere ike ịmata ma ọ bụ jiri ihe mkpalite yana njikọ nke abụọ na-emetụta njirimara akọwapụtara nke ọma. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọpụta njirimara ndị dị n'okpuru, ị nweghị ike ịhazi ndị ahịa gị ka ọ bụrụ otu dị iche iche.
Iji uru uru gị ma ọ bụ uru prop dị ka ihe na-emepụta ihe maka onye na-azụ ihe bụ otu n'ime ụzọ na-ewe oge iji mepụta onye na-azụ ihe. N'ọtụtụ oge, ọ pụtara ijikọ uru ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nwere na mkpa mmadụ dị mkpa wee jikọta ya na mpaghara ndị ahịa gị nwere ike ịmata.
Ụlọ ọrụ Bain & Company Ihe nke Pyramid bara uru bụ ụzọ dị mma isi ghọta uru prop.
Ụdị ndụ / Oge ndụ
Ọdịdị ndụ na usoro ndụ bụ ngwakọta nke njirimara igwe mmadụ enwere ike iji chọpụta mpaghara pụrụ iche nke ndị bi na ya, dịka:
Ọkwa mmepe (ụmụ ọhụrụ, mmalite nwata, etiti nwata, oge uto, n'oge ntolite, ntozu etiti, ma ọ bụ tozuru oke)
A na-ajụ iji ha dị ka ihe eji emepụta ihe maka ndị na-azụ ihe mgbe ụfọdụ dị ka "oke oke," mana ọ nwere ike ịba uru.
Isi ihe bụ ijide n'aka na enwere njikọ doro anya n'etiti ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị yana akara ngosi igwe mmadụ ọ bụla ị na-eji kọwaa ụdị ndụ gị ma ọ bụ ọkwa ndụ gị.
Iji Framework Onye zụrụ gị
Ozugbo ị rụpụtachara nkọwapụta nke sistemu gị, usoro iji ya wulite onye na-azụ gị bụ ihe kwụ ọtọ site na usoro ndị a:
Gwakọta nyocha nke ndị ahịa gị ka ị wee nweta ọmarịcha foto zuru oke nke ndị ahịa gị.
Jiri usoro gị hazie na nyochaa ndị ahịa gị ka ọ bụrụ otu n'otu n'otu
Chọpụta àgwà na àgwà ndị otu ọ bụla nwere jikọrọ ọnụ
Gwakọta ma mekwaa ihe ndị a na-ahụkarị ma chịkọta ha ka ha bụrụ ndị na-azụ ihe
Kwụpụ 1: Jikọọ nyocha na nchọpụta gị
Ọ bụrụ na ịmere nyocha nke ọma, ị ga-enwe eserese, eserese, tebụl, na nchịkọta ederede sitere na ndị otu nyocha gị, yana akwụkwọ akụkọ ole na ole juputara n'ụzọ, medians, ranges, quartiles, k- mean clusters, wdg.
Ọ bụrụ n’ịmere nyocha gị n’onwe gị, ọ nwere ike ịpụta na ị ga-enwe foto iPhone nke nnọkọ ịwụ ọcha gị.
N'ọnọdụ ọ bụla, echiche bụ ịkọwapụta ihe ị maara gbasara ndị ahịa gị, ọkachasị nkọwa gbasara ndị ha bụ, ihe kpatara ya, mgbe, na otu ha si azụta, yana ihe ọ bụla metụtara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ozugbo.
Kwụpụ 2: Jiri Framework gị hazie yana yochaa ndị ahịa n'ime otu
Ozugbo ị debere ntọala ndị ahịa gị, jiri usoro gị hazie ndị ahịa gị ka ọ bụrụ otu dị iche iche dabere na njirisi ha na-ezute.
Buru n'uche na ọbụlagodi n'ọnọdụ kachasị mma, nke a nwere ike bụrụ ihe ịma aka - mgbe ụfọdụ, ị ga-eme echiche ndị bụ isi, buru amụma ndị gụrụ akwụkwọ, ma ọ bụ rụọ ọrụ site na ọtụtụ usoro tupu ị mechaa onye na-aga ebe na ihe kpatara ya.
Ọ bụrụ na ị nweghị ike ịhazi ndị ahịa gị niile ka ha bụrụ otu, ị nwere ike ịmegharị usoro gị ma ọ bụ njirisi dị n'okpuru.
Kwụpụ 3: Chọpụta N'okpuru Demographic na/ma ọ bụ àgwà mmụọ
Ozugbo ị haziela ndị ahịa gị ka ọ bụrụ otu dị iche iche, ịkwesịrị iwepụta ụdị njirimara pụrụ iche nke ga-enyere gị aka ịmata otu na nke ọzọ.
Iji mee ka nke a dị mfe, "omume kachasị mma" na-atụ aro ilekwasị anya n'ịchọpụta àgwà ndị dabara na ngalaba ndị a:
Mkpa na Ọchịchọ
Ụgbọ ala na ihe mkpali
Mmezu na ihe ndị dị ịrịba ama
Nhọrọ ụdị ndụ
Ọkwa ego ezinụlọ
Àgwà ndị pụrụ iche - dịka ihe ọhụrụ, nke na-akpa ike, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke nwere uche, akọ na uche, wdg.
Dị ka ịhazi ndị ahịa n'ime otu dị iche iche dabere na njirisi usoro gị, ịchọpụta ụdị njirimara pụrụ iche nwere ike ịpụta iche echiche, ịkọ nkọ na / ma ọ bụ ịrụ ọrụ na ịmegharị nhọrọ gị.
Otu aghụghọ bụ ịchọ ụkpụrụ.
Olee àgwà ndị òtù nke ọ bụla nwere? Ha na-ekekọrịta igodo igwe igwe mmadụ? Isi ihe gbasara mmụọ? Ọ nwere nke ọ bụla n'ime njirimara ndị a pụrụ iche? Enwere ike iji ha mee ka ndị otu a dị iche na ndị ọzọ?
Aghụghọ ọzọ bụ ịchọ ndị na-ahụkarị ọnụ ala: pụrụ iche (ma ọ bụghị nke pụrụ iche), àgwà dị elu nke na-emekarị onye ọ bụla n'ime otu e nyere. Ọ bụ ezie na nke a nwekwara ike iwe obere mgbalị tupu ị bịarute na ndepụta kwesịrị ekwesị nke ihe ndị a na-ahụkarị, mana ọ na-eme ka ọ pụta ìhè.
Kwụpụ 4: Mee ka ọ dị mfe ma chịkọta ndị mmadụ n'otu n'otu
Ugbu a ị chọpụtala ihe nkọwapụta ihe gbasara igwe mmadụ na akparamagwa maka otu ọ bụla, ihe ikpeazụ ị ga-eme bụ ịchịkọta ma jikọta ozi a iji mepụta onye na-azụ ihe.
Nke a na-abụkarị usoro dị mfe nghọta: debe ihe kachasị pụrụ iche, nke bara uru na/ma ọ bụ onye nnọchi anya, ma wepụ ihe na-abụghị.
Ọ bụrụ na ị nwere nkọwa ole na ole yiri nke ahụ, ị ​​ga-achọ ijikọta ha; ọ bụrụ na ị nweta ihe karịrị otu ụdị nkọwa maka otu ọ bụla, ị ga-achọ ikewa ha ụzọ abụọ dị iche iche.
Mgbe ịmechara, ị ga-enwe usoro nkọwapụta nke ọ bụla na-egosipụta usoro gị ma na-anọchi anya njirimara agwakọtara nke otu ndị ahịa gị isi.
Ime ka ndị na-azụ ahịa gị bụrụ ndị nwere ike ịnweta ma nwee mmetụta
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịnye ndị otu gị ndepụta nkọwa nkọwa metụtara onye ọ bụla n'ime onye zụrụ gị, mgbakwunye ole na ole dị mfe nwere ike ime ka ozi a dịkwuo mfe ịnweta.
Malite site n'inye onye ahịa ọ bụla aha pụrụ iche nke metụtara laa azụ na nhazi nhazi gị - dịka ọmụmaatụ 4-Wheel Fred The Off-road mmetụta, Tia Onye Nkuzi, Onye nrụpụta ejiji kwụụrụ onwe ya, Wdg
Mgbe ahụ, tinye nchịkọta akụkọ ndụ dị nkenke ma ọ bụ ụdị mmadụ nke dabara na ndị na-akọwa ihe gị na ọnọdụ igwe mmadụ ọ bụla. Na n'ikpeazụ, tinye ihe oyiyi ma ọ bụ ihe atụ na na-etinye ihu n'ọnụ gị.
Ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ewu ihe n'ịntanetị (ma ọ bụ dị njikere ịrụ ọrụ ahụ n'onwe gị), ị nwere ike ime ka ndị mmadụ na-etinyekwu aka na imikpu site n'ịgbakwunye nkọwa ndị ọzọ, dị ka ụdị na nhọrọ ndụ, ihe omume ntụrụndụ na mmasị, àgwà njirimara, na/ma ọ bụ Ọchịchọ ndị a ga-ejikọkarị na ụdị onye ị na-akọwa, omume mgbasa ozi ọha, ụdị mmekọrịta, mkpa njikọ aka, mmasị akụkọ, wdg.
Ị nwekwara ike ịchọrọ ịhazi maapụ ọmịiko:
Ozugbo ị chịkọtara ndị na-azụ ahịa gị, ihe ikpeazụ ị ga-eme bụ ịkekọrịta ha na ahịa, ịzụ ahịa, imewe & mmepe, ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa, yana onye ọ bụla ọzọ nọ n'òtù gị nke kwesịrị ịghọta nke ọma onye ị na-agbalị itinye aka na otu esi eme ya. kacha mma itinye ha.
Ngwọta Ndị Ike
Mepụta ngwa ngwa ndị na-azụ ahịa data na-akpata, ICPs, maapụ ọmịiko, yana akwụkwọ egwuregwu dị mfe ịre ahịa na ọrịre maka olulu, ihe ngosi na oge atụmatụ atụmatụ.
Ikpokoro AI kwadoro anyị na-ewe ozi nkọwa dị mfe - ma ọ bụrụ na enwetara site na nyocha nke iwu ma ọ bụ mmuo gị, nka, na ihe nleba anya nke onwe - ma nyochaa ya na-akpaghị aka megide afọ 50 nke nchọpụta agụmakwụkwọ na sayensị mmadụ na akụnụba omume iji chọpụta àgwà niile dị mkpa, àgwà, na njirimara wee chịkọta nsonaazụ ya n'ụzọ na-eme ka ọ dị mfe nghọta na ime ihe.
Na mgbakwunye na draịva bụ isi, mkpali, na ọtụtụ nleba anya ọrụ ezubere iche nke ukwuu, enwere ọtụtụ ndụmọdụ bara uru na atụmatụ emebere iji nyere aka ịzụ ahịa, ịdepụta aha, ọdịnaya na otu ndị na-ere ahịa.
Nke a bụ ntuziaka, akwụkwọ ọrụ na akụrụngwa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, Martech Zone Ndị na-agụ akwụkwọ nwekwara ike ịchekwa 20% na atụmatụ ọkachamara:
Ihe onwunwe nke Persona Ndị Ike
Tags: b2bb2b onye zụrụb2cb2c onye zụrụbain & ụlọ ọrụonye zụrụ yaasịwo na-akpaliịzụrụ ihe mkpalinjem ndị ahịaahịa njem mapdtcdtc onye na-azụ iheihe ndị bara uruihe pyramid bara uruobiarụ ọrụmaapụ njemTravelmapsmgbanwe ndụusoro ndụlifestylespersonapersona frameworksndị mmadụndị ọchịchịmmekọrịta mmadụ na ibe yajiri ikpejiri okwuuruuru propechiche bara uru
Ihe kpatara ndị mmadụ anaghị eso ụdịdị na Twitter